OGEYSIIS KU SAABSAN | Hsao2
OGEYSIIS KU SAABSAN
Ururka Maamulka Adeegyada Insaanka (HSAO) wuxuu muddo dheer garowsanaa in shakhsiyaadka aan ganacsi la galno ay qiimeynayaan asturnaantooda. Si kastaba ha noqotee, si loo sameeyo ganacsiga caalamiga ah ee dhaqaalahan elektarooniga ah ee sii kordhaya, aruurinta macluumaadka shaqsiyadeed badanaa waa mid lagama maarmaan ah oo la doonayo. Hadafkayagu waa in aan isku dheelitirno faa'iidooyinka ganacsiga e-commerce iyo xuquuqda shakhsiyaadka si looga hortago in si khaldan loo isticmaalo macluumaadkooda.
Ururinta Macluumaadka Domainka
Xaaladaha qaarkood, HSAO waxaa laga yaabaa inay codsato macluumaad shakhsiyeed sida magacaaga, cinwaanka emaylkaaga, magaca shirkadda, ama lambarka taleefankaaga. Jawaabtaada su'aalahan waa mid ikhtiyaari ah. HSAO waxay u isticmaashaa macluumaadkan sidii ay u habayn lahayd khibradaada websaydhka. Intaas waxaa sii dheer, HSAO waxaa laga yaabaa inay u isticmaasho macluumaadkan ujeeddooyin kale oo ganacsi, sida inay kugu wargeliso badeecadaha iyo adeegyada kaa caawin kara ganacsigaaga, kobcinta diiwaangelinta barta, iyo ka shaqeynta nidaamyada.
Isku soo wada duuboo, waad booqan kartaa bartayada adigoon bixin wax macluumaad shakhsi ah. Si kastaba ha noqotee, aagagga boggan ee u baahan macluumaadkan inay ku dhammaystiraan shaqadooda habeynta ayaa laga yaabaa inaysan heli karin kuwa dooranaya inaysan shaaca ka qaadin macluumaadka la codsaday.
HSAO sidoo kale waxay aruurisaa macluumaadka domainka iyada oo qayb ka ah falanqaynta ay ku leedahay adeegsiga boggan. Xogtan ayaa noo suurtogelinaysa inaan si fiican u baranno taas oo macaamiisha soo booqda barteenna, inta jeer ee ay booqdaan, iyo waaxdee qaybo ka mid ah goobta ay inta badan booqdaan. HSAO waxay u isticmaashaa macluumaadkan sidii ay u wanaajin lahayd adeegyadeeda ku saleysan webka. Macluumaadka si otomaatig ah ayaa loo ururiyaa umana baahna wax talaabo ah oo dhinacaaga ah.
Siidaynta Xisbiyada Seddexaad
Xaaladaha aan aaminsanahay in danahaaga ganacsi loo adeegi doono, HSAO waxaa laga yaabaa inay la wadaagaan macluumaadkaaga (marka laga reebo koontada, kaarka deynta, iyo macluumaadka dalbashada) la-hawlgalayaasha HSAO, kuwaas oo kaaga digaya waxyaabaha ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada cusub si loo hagaajiyo heerkaaga tartanka. . Haddii aad ka hesho agab suuq-geyn oo aan laga dooneyn mid ka mid ah Shuraakadaheena Ganacsiga, fadlan ogeysii inaad jeclaan lahayd in lagaa saaro liiska xiriirkooda.
Bogagga qaar ee ku jira boggan ayaa adeegsada "cookies", kuwaas oo ah faylal yaryar oo ay degelku ku meeleeyaan drivekaaga ujeeddooyin aqoonsi. Faylashaani waxaa loo isticmaalaa diiwaangelinta goobta iyo is habeynta marka xigta ee aad na soo booqato. Fadlan la soco in cookies aan akhrin karin xogta ka baxsan drive-kaaga adag. Biraawsarkaaga bogga ayaa kuu oggolaan kara in lagu ogeysiiyo goorta aad helayso cookie, oo ku siinaysa doorashada aad ku aqbasho iyo haddii kale. Adigoon aqbalin cookies, boggaga qaar waxaa laga yaabaa inaysan si buuxda u shaqeyn oo laga yaabo inaadan awood u laheyn inaad u hesho macluumaad gaar ah boggan.
HSAO waxay xaq u leedahay inay beddesho, wax ka beddesho, ama cusboonaysiiso bayaankan wakhti kasta ogeysiis la'aan.